नर्दन टेरेटोरी, वेष्टर्न अष्ट्रेलिया र तास्मानियाबाट आउने यात्रुलाई साउथ अष्ट्रेलियाले विना क्वारेन्टाईन प्रवेश दिने ! « MNTVONLINE.COM
नर्दन टेरेटोरी, वेष्टर्न अष्ट्रेलिया र तास्मानियाबाट आउने यात्रुलाई साउथ अष्ट्रेलियाले विना क्वारेन्टाईन प्रवेश दिने !
अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या घट्दै जाँदा विभिन्न राज्यहरुले आफ्नो नाका खुल्ला बनाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो कडीमा साउथ अष्ट्रेलियाले नर्दन टेरेटोरी, वेष्टर्न अष्ट्रेलिया र तास्मानिया राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु आफ्नो राज्यमा आएमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ ।
साउथ अष्ट्रेलियाका प्रिमियर स्टेफन मार्शलले क्वीन्सल्याण्डबाट आउने यात्रुका लागि समेत राज्यको ढोका खोल्ने योजना अघि बढेको बताए । आफुहरुले सम्बन्धित राज्यका नबसोबासकर्तालाई सिमाना खुल्ला गरेपछि ति राज्यले पनि यस्तै सुविधा दिने आशा उनले व्यक्त गरे । त्यस बाहेक अन्य राज्यहरुबाट आउन यात्रुहरुले अनिवार्या १४ दिनकोक्वारेन्टाईनमा बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।